ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: အမျိုးသမီး အဆင့်အတန်းနဲ့ အခွင့်အရေး
အမျိုးသမီး အဆင့်အတန်းနဲ့ အခွင့်အရေး
နိုင်ငံတကာမှာ ယောက်ျားလေး များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေး များရဲ့ အဆင့် အတန်းနဲ့ အခွင့်အရေးကို ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ မှတ်သား ရသမျှ တင်ပြ ပါဦးမယ်။
၁. ကတော်၊ ဇနီး မယား သို့သော် ကံဆိုးရင်တော့ ပွဲတက်မယား (မပစ်ပယ် နိုင်သေးတဲ့ အစဉ်အလာ အရ လူလေးစား နေရာပေး အခံရဆုံး အဆင့်)
၂. မယားငယ် (ဒုတိယ အဆင့် လူလေးစား ခံရ ပါသေးတယ်။ ပွဲတက် မယား မဟုတ် ပေမယ့် ဇနီး မယား တစ်ယောက် အဖြစ် ရသင့် ရထိုက်တဲ့ အကျိုး ခံစားခွင့် များကိုလည်း ရတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လူရာဝင်မှု၊ ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိမှု များကိုတော့ ရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။)
၃. ရည်းစား (မြန်မာပြည် မှာလို သာမန် ချစ်ကြိုက်တဲ့ သမီး ရည်းစား ကို ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ကြိုက်လို့ အတူ နေ နေသူများ ရှိသလို အကြောင်း တစုံ တရာကြောင့် အတူ နေသူ များလဲ ရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင် ရှိလျက်နဲ့ ရည်းစား ထားသူ များလဲ ရှိပြီး ဒီရည်းစား အတွက် တာဝန် ယူမှု နည်းပါတယ်။ တွဲနေခိုက် အလို လိုက်တဲ့ သဘော ထက် မပိုလှ ပါဘူး။ ကိုယ့်ရည်းစားရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လူရာ ၀င်မှုလဲ မရှိလှ ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် ကိုယ်ကို တန်ဖိုး ထားသူများ ရည်းစား မထားခင် အတော် သတိထား ကြသလို စေ့စပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်း ခံရရင် ဒါမှ မဟုတ် လက်ထပ်ခွင့် တောင်းခံရရင် အတော်ကြီးကို ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူ တတ်ကြ ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ခေါ် ဝေါ် သတ်မှတ်တဲ့ ရည်းစားနဲ့ နိုင်ငံခြားက သတ်မှတ် ခေါ်ဝေါ်တဲ့ ရည်းစားနဲ့ အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ် ပုံချင်း မတူ တာကို သတိ ထားသင့် ပါတယ်။)
၄. သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် (မြန်မာပြည်က စံနှုံးနဲ့ သတ်မှတ်ပုံချင်း မကွာလှ ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင် အရည် အချင်း ရှိရင် ရှိသလောက်၊ တာဝန် ယူနိုင်ရင် ယူနိုင် သလောက် သူ့နေရာနဲ့သူ အရေးပါ အရာရောက် လှသ လို တန်ဖိုးထား အလေးစား ခံရ တတ်ပါတယ်။)
၅. ကြေးစား သို့မဟုတ် ညဉ့်ငှက်မယ် (ရှင်းပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ဟိုစာလုံးကို မသုံးချင် လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီကြေးစား မှာလဲ အဆင့် အတန်း အဓိပ္ပာယ် အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ခန္ဓာကိုယ်၊ သွေးသားကို ရင်းနှီးပြီး အလုပ် လုပ်သူကို ဆိုလိုတာပါ။ တစ်နာရီ ဘယ်ဈေးနဲ့ အလုပ် လုပ်တဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်များ၊ အခြား လမ်းညွှန် အေဂျင်စီ များကို မဆိုလိုပါ *** )
၅.၁. အပင့်ဆောင်ခံ ကြေးစား (တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ ကြီးများက ထွက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင့် မီ ဇိမ်ခံ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ် များရဲ့ ဧည့်ဆောင်မှာ အကြိုတော်၊ အမှာတော် များက တဆင့် ပင့်ရ တဲ့ ကြေးစားမယ် များဟာ အတော့ကို ပညာ တတ်ကြ ပါတယ်။ ဂျပန်ပြည်က ရှေးခေတ် ဂေးရှားမယ် များလို အတတ်ပညာ များကို နှစ်ချီ လေ့လာ သင်ယူ ထားကြ သလို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ ထုံးစံများနဲ့ ဘာသာ စကားများကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက် ထားကြ ပါသေးတယ်။ သာမန် ရုံးဝန်ထမ်း မိန်းကလေး ထက်ကို စမတ်ကျ နေတတ် ပါသေးတယ်။ သူတို့ဟာ ငယ်စဉ်ဘ၀ ကတည်းက ဒီအတွက် လေ့ကျင့် သင်ကြား ခံရတဲ့ အတွက်သူတို့ အလုပ်ကို ဂုဏ်ယူခြင်း ဆိုတဲ့ လွဲမှားတဲ့ အယူ အဆကြောင့် ဒီဘ၀ကို ပျော်နေကြ ပါတယ်။)
၅.၂. အဆင့်မြင့် ကြေးစား (လှောင်ပိတ်ခံ အကျယ်ချုပ် ကျသလို နေရတဲ့ ကြေးကြီးတဲ့ ကြေးစား မယ်လေးများ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရောင်းစား ခံရတာ ဖြစ်စေ၊ အဖမ်း ခံရတာ ဖြစ်စေ ဒီဘ၀ ရောက်လာတာ များပြီး သန့်ပြန့်တဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ တခြား ကြေးစားနဲ့ ယှဉ်ရင် နောက်ကြောင်း ကောင်းတဲ့ ဘ၀ နောက်ခံ ရှိတတ် ကြပါတယ်။ လစ်ရင် လစ်သလို ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစား တတ်ကြ သလို အဖမ်း ခံရရင်လဲ အသေဆိုးနဲ့ အသေသတ်ခြင်း ခံရ ရှာတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ကြားဖူးပါတယ်။)
၅.၃. ခရီးဖော် ကြေးစား (အထက်ဖော်ပြပါ ကြေးစား ၂မျိုးထဲမှာ ဖောက်သည်မြဲတဲ့ ကြေးစားကို ဖောက်သည် ဧည့်သည်က အာမခံ တဲ့အခါ ဧည့်သည်နဲ့ အတူ ခရီးထွက်ခွင့်၊ အပြင်ထွက် လည်ပတ်ခွင့် ရတတ်ပါတယ်။ ထွက်မပြေးဖို့ စိတ်ချ ရလောက်တဲ့ အခြေအနေ ဆိုရင် ပိုင်ရှင်က ခွင့်ပြု တတ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဖောက်သည် က အာမခံ တစ်ခုခု ပေးရတတ် ပါတယ်။ )
၅.၄. သာမန်ကြေးစား (အထူး မပြောလို ပါဘူး။ လူတိုင်း လိုလို အနည်းနဲ့ အများ သိနေကြတာပါ)
၅.၅. စူပါ ကြေးစား ( အထက်ဖော်ပြပါ ကြေးစားမယ် များထဲက ရုပ်ရည် ရူပကာနဲ့ အဆက်အသွယ်ပေါ် မူတည် လို့ စာနယ်ဇင်း များရဲ့ စာမျက်နှာနဲ့ ရုပ်ရှင် တီဗွီ ဖန်သားပြင်ပေါ်ကို ရောက်လာ တတ်တဲ့ စူပါ မင်းသမီး များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှု လမ်းပေါ် မူတည်လို့ တကယ့် စူပါစတား များဖြစ်လာ ကြသူများ ရှိသလို အညှီအဟောက် ကြော်ငြာများ အတွက် ကိုယ်ဟန်ပြ ပေးရတဲ့ Porn Star များလဲ ဖြစ်သွား ကြပါတယ်။ Super star and Porn Star ကြားမှာ အမူအရာ၊ ကိုယ်ဟန်ပြပုံနဲ့ မျက်နှာပေးများလဲ သိသာစွာ ကွာခြား တတ် ပါတယ်။ တခါက နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာ ကျောင်းသူ မလေး တစ်ယောက် မသိဘဲနဲ့ ဆိုဖာပေါ် မှောက်ရင်း ရယ်မော နေဟန် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြီး သူငယ်ချင်း များကို ပို့မိလို့ တော်တော် ကြီးကို အထင်လွဲ သိက္ခာကျ ခဲ့ရ ဖူးပါတယ်။ အနေအထိုင် တတ်ကြပါမှ တန်ကာ ကျပါတယ်။)
မြန်မာ မိန်းကလေးများ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားရင်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အခွင့်အရေး အတွက် ကိုယ် နေချင်တဲ့ အဆင့်အတန်းကို သတိရှိရှိ ပညာသား ပါပါ ရွေးချယ်ပြီး နေထိုင် နိုင်ကြ ပါစေ။ အနေတတ်၊ အ၀တ်အဆင် တတ်ကြ ပါစေ။
(ဒီဆောင်းပါးကို ရေးနိုင်ဖို့ အချက်အလက်များကို ကူညီ ရှာဖွေ ပြောပြ ပေးခဲ့တဲ့ Faculty of Social Science မှာ မဟာဝိဇ္ဇာ စာတမ်းပြုစုသူ သူငယ်ချင်း များကို ကျေးဇူး အထူး တင်ပါတယ်။)
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 3:41 AM